Blogs4Aid: Fampielezan-kevitra Ho Fampiatoana ny Herisetra Mihatra Amin’ny Vehivavy Any India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2012 5:05 GMT
Tamin'ny herintaona, gaga ny injeniera amin'ny fanangànana sady mpamorona rindrambaiko teo aloha, Shemeer Padinzjharedil (29) raha nahafantatra avy amina fanadihadiana iray nataon'ny Fikambanana Thomson Reuters, izay nanome an'i India ny laharana faha-efatra amin'ireo toerana mampidi-doza indrindra ho an'ny vehivavy eran-tany. Nahatsapa izy fa maro ireo tatitry ny vaovao momba ireo famonoana mihatra amin'ny vehivavy, nefa tsy voarakitra araka ny tokony ho izy izany. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hihetsika i Shemeer ary nanomboka nanangana vohikala mpampahalala vaovao ho an'ny daholobe napetraka ao amin'ny sehatra Ushahidi antsoina hoe www.maps4aid.com izay ahafahan'ny tsirairay mitatitra ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy.
Raha mbola eo an-dàlam-pivoarany io vohikala io, mivondrona sy voarakitra anaty sarintany ao amin'io vohikala io ireo tatitra ireo, izay efa mampiseho fironana vitsivitsy: Ny foiben'ny mponina sy ireo faritra andrenivohitra no mitatitra herisetra be indrindra na inona na inona ny sokajy.
Nanomboka fanentanana iray hafa ny Maps4aid, Blogs4Aid mba hanatsaharana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy any India. Ho mariky ny fanajana ny “Iron Lady of Manipur” , toe-panahin'i Chanu Sharmila tsy azo nofehezina tamin'ny fiadiana ho an'ny marina, hisy hetsika manokana ho tanterahina ny 14 Martsa 2012.
Avy ao amin'ilay vohikala fanentanana Blogs4Aid:
Atsaharo ny Herisetra Manoloana Ny Vehivavy Mitafy Sari:
Misy sari vita avy amina landihazo iray mirakitra ireo tatitra 2000 mikasika ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy azo avy ao amin'ny www.maps4aid.com. Hatao printy amin'ilay sari ihany koa ireo petadrindrina kely fanairana. Hatonta printy ihany koa ny lisitr'ireo mpitoraka bilaogy mandray anjara amin'ity hetsika ity sy ny fampidirana ao amin'ny bilaoginy tsirairay avy tahaka ny asehon'ny sary etsy ambany. Vantany vao voatonta printy izany, halefa ho an'ireo mpanapa-kevitra 10 voafidy ao amin'ny firenena ireo sari ireo miaraka amina tatitra PDF milaza amin'ny antsipiriany ireo trangana Herisetra Mihatra amin'ny Vehivavy 2000 voarakitra, sy ny fampidiran-dahatsoratra am-bilaogy 100 amina endrika PDF e-book sy rakitr'ireo petadrindrina. [..] Ny antom-pisian'ity fanentanana ity dia ny hanairana ny saina amin'ny alalan'ny fampidirana ny fianakaviamben'ny aterineto sy ny fanapariahana ny hafatra amina fomba raitra sy tsara.
Eto no fomba ahafahanao manampy ity fanentanana ity amin'ny alalan'ny famoahanao ireo tantaranao na ny voasoratrao momba izany. Ireto misy petadrindrina sy sary vitsivitsy manome fomba mba hanaingoanao ny fanentananao.
"Kilasy momba ny Fanafahana & Fandalàna ny maha-Vehivavy" any amin'ny Anjerimanontolon'i Bangalore avy amin'i #KKseethamma. Sary nindramina tamin'ny Maps4Aid
Miangavy anao hanaraka ireo kaonty Twitter sy Facebook-n'io fanentanana io ho an'ireo vaovao farany.